Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Hiban Mayno Tagtadeeni ee Waxaynu Hubsan Timaadadeena.
Maqaal: Hiban Mayno Tagtadeeni ee Waxaynu Hubsan Timaadadeena.
Posted by ONA Admin	/ August 17, 2018
Taariikhda dheer ee wax qorta tiro aad u yar oo dhallinyarteena ah ayaa guddoonsada doorka ay ku leeyihiin xoraynta dalkooda iyagoo waajahaya khataraha ugu badan ee horyaala.
Waxaan rumaysnahay fikradd in mawjadda iyo taariikhduba ay inoo adeegi doonaan, kuwa maanta raba xornimo dhab ah ayaa ka tiro badan ilaa xad kuwa raba inay u xidhnaadaan masiirkooda shaqsi ahaaneed.
Tamarteena, caqligeena iyo waqtigeenaba waxaynu u huraynaa inaynu ku dadaalno sidii aynu ilayska ugu shidi lahayn dalkeena, waana ta aynu u taaganahay, iftiinka ka soo ifa ilayska aynu shidno ayaa si dhaba ah u iftiimin doona dalkeena.
Waxay fikradu guulaysataa marka rumaysnaanteedu xoogaysato, darteedna loo bixiyo daacadnimadeeda, badatana xamaasadda loo hayo, lana helo diyaarsanaanta keenaysa hurid iyo xaqiijinteeda oo loo hawlgalo.
Taasina waxay u dhowdahay inay noqoto afartan tiir ee kala ah:
Aas’aaska iimaanku waa wadne wax garad ah.
Aas’aaska Daacadnimaduna waa qalbi fayow.
Aas’aaska Xamaasaduna waa dareen xoogan.
Aas’aaska Hawshuna waa go’aan adag.
Intaas aynu sheegnay oo dhan waa mid ay dhallintu iska leedahay oo u gaara ah, sidaas ayayna dhallintu waligeedba u ahayd tiirka kicitaankeeda iyo fulinteeda, fulin kastaana waxay iska sirta xoogeeda, fikrad kastaana waxay leedahay cid qaada calankeeda.
Hadaba hadii ay xaqiiqooyinka maanta yihiin riyooyinkii shalay oo ahaa in la halgami karo wakhti dheer ilaa xoriyada.
Riyada maantana waa xaqiiqda barito oo ah in la guulaysan karo.
Dhallinyartu ha aqoonsato inay tahay xooga aan xuduudka lahayn ee isbadal la taaban karo, la tiigsan karo, Lana tijaabin karo keeni karta.